Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Saami Jasim Maxammad al-Jaburi
Saami Jasim Maxammad al-Jaburi
Sami Jasim Maxammad al-Jaburi, oo sidoo kale loo yaqaan Xaji Xamid, waa hoggaamiye sare oo ka tirsan Kooxda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Siiriya (ISIS) wuxuuna xubin ka yahay dhaxal sugaha kooxda ISIS ee al-Qaacida ee Ciraaq (AQI). Maxammad al-Jaburi wuxuu door muhiim ah ka qaatay maareynta dhaqaalaha howlgalada argagixisada ee kooxda ISIS.
Intii uu ahaa ku xigeenka kooxda ISIS ee koonfurta Mosul sanadkii 2014, waxaa la sheegay inuu hayay jagada wasiirka maaliyadda ee ISIS, isagoo kormeeraya hawlgallada kooxda dakhligii ka soo galayay iibka sharci darrada ahaa ee saliida, gaaska, waxyaabihii qadiimiga, iyo macdanta.
Waaxda Maaliyadda Mareykanka waxay isagu u magacowday inuu yahay Argagixiso Gaar ah oo loo magacaabay bishii Seteember 2015, sida uu qabo Amarka Go’aan meel-marinta (EO) 13224, kaasoo cunaqabateyn dhaqaale saaray argagixisada iyo kuwa bixiya taageerada argagixisada ama falalka argagixisada.
Waaxda Hanti-dhowrka Mareynaka SDGT: Seteember 2015